Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Xuquuqda Aadanaha oo laga xusay Xagardheer iyo kooxda KACAAN ee OYSU
Maalinta Xuquuqda Aadanaha oo laga xusay Xagardheer iyo kooxda KACAAN ee OYSU
Maalin nimadii Talaadada ee ay taariikhdu kubeegnayd 10/12/13 waxaa xerada qoxootiga ee Xagardheere lagu qabtay xaflad aad ubalaadhan oo ay kasoo qayb galeen dhamaan qaybaha kaladuwan ee qaxootiga ku ah xerada Xagardheere.
Xafladan oo lagu maamuusayay maalinta loo madlay xuquuqda aadamaha waxaa soo agaasimay hay’ada IRC qaybteeda xuquuqul insaanka ee NCCK waxaana lagu marti qaaday dhamaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan xerada dadkii kasoo qaybgalay xaflada ee soo bandhigay barnaamijkooda xuquuqul insaanka waxaa kamid ahaa Soomaali, Soomaali-baantuu, Oromo, Sudaan iyo S.Ogadenya. b
Bulshada S.Ogadenya waxaa goobta xaflada u matalayay Kooxda caanka ah ee lagu magacaabo KACAAN. Kooxda KACAAN ayaa madasha kusoo bandhigtay barnaamij dhamaan dadkii madasha fadhiyay ay la tiiraanyoodeen oo ku saabsanaa dhibaatada bini’aadam nimo ee ka jirta wadanka Ogadenia waxayna goobta kusoo bandhigeen riwaayad ka hadlaysay dhibaadada ka jirta wadankoodii hooyo ee Ogadenia. Waxaa kamid ahaa arimaha ay soo bandhigeen falalka xun xun ee xuquuqda aadamaha kadhanka ah ee ay ciidamada gumaysiga Itoobiya kula kacayaan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsanin sida Dil wadareedka, Kufsi wadareedka barakicin joogta ah iyo dhaca shacabka oo ka noqday Ogadeniya mid caadi ah.
Sidoo kale kooxda KACAAN ayaa goobta kasoo jeedisay Gabayo ku baxayay luuqada Ingriiska, majaajilooyin, khudbado kahadlayay xuquuqul insaanka Ogadenia iyo Dhaantada oo ciyaarta 1aad ee dhaqanka u ah umada Ogadenia guud ahaan.
Hadal haan mabuuxshee kooxda KACAAN ayaa lagu dhawaaqay in ay gashay kaalinta 1aad waxayna noqotay kooxda kaliya ee dadkii madasha fadhiyay ay isku raaceen in ay yihiin koox qiima leh.
Dhanka kale waxaa goobta joogay ideecado iyo TV yo waxayna waraysiyo iyo sawiraba kaqaadeen kooxda KACAAN. TVyada waraystay dhalinta waxaa kamid ahaa ROYAL TV, SOMALI CHANAL iyo ideecada badan oo ay kamid yihiin STAR FM iyo DHADHAB FM. Waxayna dhamaan ka warameen sida loola dhaqmo dadka kunool wadanka la gumaysto ee Ogadenya.
Ugu dambayntii, xaflada ayaa soo gaba gabowday iyadoo lagu sheekaysanayo barnaamijkii cajiibka ahaa ee murugada badnaa ee ay soo bandhigeen koox fanneedka OYSU Xagardheere ee KACAAN.